Mitantana ny fanamafisana ny ranomasim-be | Reef Resilience
Ny fandriana ahidrano any akaikin'ny haran-dranomasina dia mety hanome buffer eo an-toerana avy amin'ny vokatry ny fanamorana ny ranomasina. Izany dia satria ny ahidrano maka CO2 ao amin'ny tsanganana rano amin'ny alàlan'ny fotosintesis ary manandratra ny toetran'ny mahavoky aragonite, izay mety hanimba ny fihenan'ny asan'ny ranomasina amin'ny mizana eo an-toerana. Sary © Katie Laing
Ocean acidification (OA) dia iray amin'ireo loza lehibe indrindra maharitra amin'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina ary mbola hitohy mandritra ity taonjato ity, na inona na inona fandrosoana amin'ny fampihenana ny ala noho ny habetsahan'ny gazy karbonika efa ao anatin'ny rivotra iainana.
Ny fanamafisana ny ranomasina dia mampihena ny fisian'ny ionkarbonatika izay takian'ny orinasa maro - toy ny vatohara sy ny vatomamy - hanamboatra skelètina sy kiraro. Ho an'ny vatohara ho an'ny vatohara, ny tena manan-danja indrindra amin'ny fisorohana ny ranomasimbe dia ny azy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina, algoma coralline ary ny tahan'ny fanodinana simika amin'ny fantsom-bary, izay mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiaraha-monina trondro.
Amin'izao fotoana izao, ny tari-dalana tsara indrindra amin'ny fitantanana ny fanamafisana ny ranomasimbe dia mitarika laharam-pahamehana amin'ny fiarovana ny refugia voajanahary sy mitantana ny fitaintainana ao an-toerana amin'ny vatohara. Ny tetik'asa fitantanana izay miaro ireo 'refugia voajanahary'amin'ny fanenjehana hafa dia mety hanampy ny vatohara hiatrika ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiovaovan'ny ranomasina. Ireo toetra izay mety manondro ny habaka izay tsy dia marefo loatra amin'ny fanamafisana ny ranomasina: ref
Ny faritra manan-karena karambato, toy ny harambato voavoatra sy ny nosy kalkôna, fonenana maranitra lehibe, vatohara / vatohara ho an'ny vatoharan-dranomasina,
Ny harena isan-karazany amin'ny haran-dranomasina dia mirotsaka amin'ny ranomasimbe. Ny fidiran'ny ranomandry ranomandry dia mitondra ny lazan'ny alikaola sy ny sata izay manohana ny vatohara sy ny trano fonenana
Trano fandiovana goavam-be manakaiky ny vatohara. Ireo dia mety hanome fiantraikany eo amin'ny mponina eo an-toerana ho an'ny haran-dranomasina akaikikaiky, satria mety hampihena ny CO izany.2 ref
Araka ny fampivoaran'ny siansa dia zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny manavaka ireo karazana haran-dranomasina maro samihafa ao amin'ny sambo simika sy ny fitondran'ny ranomasina an-dranomasina (ohatra ny pH ambony sy ambany ary ny aragonite sata, faritra misy ny fari-pahaizana ambony sy ambany) fampidirana ao amin'ny MPA. Izany dia hampitombo ny fahapotehana amin'ny fiarovana ny vatohara mifangaro amin'ny toe-pahasalamana isan-karazany ary manaparitaka ny mety hisian'ny karazan-karazan-karazan-karazan-javamaniry hafa manimba ny ranomasina.
Mampihena ny fitaintainana izay mampitombo ny fe-potoana famerenana ny ranomasina - Ny mpitantana dia afaka manohana ny faharetan'ny haran-dranomasina amin'ny fampihenana ny orinasa hafa manimba ny tontolo iainana an-dranomasina (ohatra: ny fihenan'ny kalitaon'ny rano, ny fandotoana amoron-dranomasina, ary ny fitrandrahana ireo karazan-tsarimihetsika manan-danja toy ny herbivores). Ny ezaka toy izany dia mety hanampy ny zavaboary an-dranomasina mba hampifantoka ny loharanon-karenany amin'ny fandrosoana, ny famenoana, ary ny fananganana fa tsy amin'ny fanamboarana simba. ref Ny fampihenana ny loharanom-pahavoazana vokatry ny tany (ohatra, ny fandoahana ny alimenta sy ny fandotoana) dia heverina ho fomba iray lehibe hanantonana ny fanangonana any amin'ny ranomasina amoron-dranomasina satria ny ronono toy ny phosphorus sy ny azota ary ny kininina fototra amin'ny tany dia mety hampitombo ny asidra amoron-dranomasina sy ny ranomasina rano. ref Ny tetikady fototra hiatrehana ny fanamafisana ny ranomasina dia ny fanamafisana ny lalàna mifehy ny tontolo iainana (toy ny US Clean Water Act) mba hampihenana ny fisintonana sy ny loto mifandraika, ny fifehezana ny moron-dranomasina, ary ny fampiharana ny fatran'ny emission ho an'ny loto toy ny oxidium azota sy ny oksida. ref
Fanadihadiana sy fampiharana ireo fepetra fisakanana vaovao izay mampihena ny fiantraikan'ny ranomafana ny ranomasina izay azo atao - Tsy maintsy dinihina ny dinidinika mivantana mba ahafahana manamaivana ny fiantraikan'ny fananganana ranomasina. Ireo fomba fijery ireo dia mety ahitana ny fomba fiasa ara-jeônika sy ny fandefasana bio. ref Na izany aza, ny lanjany ara-jeografika, ny vanim-potoana, ary ny fandaniana ara-toekarena sy tontolo iainana sy ny tombontsoa avy amin'ireo fitsaboana ireo dia tsy maintsy dinihina bebe kokoa mialohan'ny ahafahana mametraka azy ireo.
Mamporisika laharam-pahamehana amin'ny fikarohana mba hampidirana ny fanamafisana ny ranomasina amin'ny planina sy ny fitantanana ny fiarovana - Manana andraikitra lehibe ny mpandray anjara amin'ny famporisihana fikarohana izay mitaky fitiliana mivantana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana fikarohana na fanohanana izany fiaraha-miasa izany. Ireo laharam-pahamehana ireo dia ahitana: 1) fametrahana loharanom-pitaovam-pandrefana amoron-dranomasina; 2) mametraka baselines ekolojika; 3) mamaritra ny karazam-bika / habaka / fiheveran'ny fiaraha-monina ny fanamafisana ny ranomasina; 4) mandrindra ny fiovan'ny sela karakaina karena; ary 5) izay mamaritra ny fiantraikany eo amin'ny kernelista amin'ny tsindry maro. ref Zava-dehibe ihany koa ny hamporisihana ny fikarohana ara-tsosialy momba ny fiantraikan'ny ranomafana ny ranomasina, ny vanim-potoana hitrangan'ny fiantraikany, ary ny fomba hampitomboana ny fampandrosoana sy ny faharetan'ny rafitra sosialy ara-ekonomika eo anatrehan'ny fiovan'ny toetr'andro. ref
Fampihenana ny fiantraikan'ny ranomafana ny ranomasina - Ny fampiharana ny politikam-pirenena na iraisam-pirenena mba hampihenana ny fatran'ny karbaona maneran-tany dia ny dingana lehibe indrindra amin'ny fanalefahana ny fiantraikan'ny fananganana ranomasina. Ireto ambany ireto dia ahitana ny hevi-dehibe avy amin'ireo fanambarana roa izay miresaka momba ny fananganana ny ranomasina: ny fanambarana Honolulu sy ny fanambarana Monaco.
Ho valin'ny fanamby maika amin'ny fanamafisana ny ranomasina, dia nantsoin'ny The Nature Conservancy atrikasa iray ho an'ireo manam-pahaizana momba ny ranomasina tao Honolulu, Hawaii, ny volana aogositra 2008. Anisan'izany ny mpitantana ny haran-dranomasina, ny mpaka sary, ny manam-pahaizana momba ny toetrandro ary ny mpahay siansa an-dranomasina. Ny tanjon'ity atrikasa ity dia ny hampivelatra ny fototry ny paikady fampifanarahana izay azon'ny mpitantana an-dranomasina ampiharina hiatrehana ny fiatraikan'ny fanamorana rano.
Ny tatitra farany momba ny atrikasa, antsoina misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fanambarana Honolulu momba ny fanamafisana ny ranomasim-be sy ny fitantanana ny haratomanokatra fisie PDF , dia mamaritra ny ankapobeny ny politika sy ny fomba fitantanana izay hitarika ny dingana voalohany sy maika ilaina mba hanomezana ny haran-dranomasina ho vintana tsara indrindra amin'ny fanamafisana ny ranomasimbe. ref
Ny Fanambarana dia nanindry fa ny tetikady lehibe roa dia tokony hampiharina maika sy amin'ny fotoana rehetra mba hanamaivanana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiarovana ny sandan'ny rafitra haranify vatohara:
Afaho ny fivoahana solika
Amboary ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina tropikaly tropikaly mba hampitombo ny fahaizan'izy ireo hanohitra sy hiarina amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro.
Ireto tolo-kevitra manaraka ireto:
Ampidiro ny haran-dranomasina ambany na ny fahatsapana ny fanamafisana ny ranomasimbe ao amin'ny drafitry ny zon'ny MPA mandritra ny fampandrosoana na ny famerenana tsy tapaka.
Ampifandraisina amin'ny fitantanana MPA ny drafitr'asa manokana sy ny asa atao ho an'ny adihevitra mba hiatrehana ireo fandrahonana miovaova eo amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro (fanamafisana ny ranomasina sy ny fiakaran'ny mari-pana sy ny ranomasina), anisan'izany ny fanaraha-maso ny fahombiazan'izy ireo.
Manamarina matetika ny fitantanana ny haran-dranomasina momba ny haran-dranomasina mba hampidirana ny fikarohana farany sy ny fikarohana siantifika ho fomba fiasa henjana sy mampifanaraka amin'ny fiatrehana ny fiantraikan'ny fanamorana ny ranomasina.
Ny fampivoarana, ny fitsapana, ary, raha ilaina, dia mampihatra ny fepetra hampihenana ny fiantraikan'ny ranomandry eny an-toerana amin'ny sehatra sy karazany avo indrindra, ohatra amin'ny fampihenana ny fiantraikany amin'ny fikorontanana eo an-toerana.
Ny fampivoarana, ny fitsapana ary ny fanatanterahana ny fandraisan'andraikitra vaovao mba hampihenana ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny fanamafisana ny ranomasimbe, ary ny fampiroboroboana ny fambolena harena voaaro amin'ny fahasimban'ny karazan-karena amin'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ka anisan'izany ny mari-pahaizana ambony ambany sy ny fiakaran'ny ranomasina.
Ampidiro ny fitantanana ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tany sy ny morontsiraka ary ny fomba fampihenana ny fandotoana (indrindra fa ny amôniôma, ny oksizenina ary ny oksidena solifara) izay mampitombo ny asan'ny rano eo an-toerana.
Ireo mpahay siansa an-dranomasina izay nihaona tao Monaco tamin'ny volana oktobra 2008 dia namoaka fanambarana mahery tamin'ny 30 Janoary 2009 momba ny fihenan'ny asidra ranomasina noho ny fitomboan'ny gazy karbonika ateraky ny fiovan'ny toetr'andro entin'ny olombelona. Miantso ny Governemanta ny Fanambarana mba handray andraikitra maika hanena ny famoahana entona karbaona. Mpahay siansa an-dranomasina 150 mahery avy amin'ny firenena 26 no nanao sonia izany misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanambarana Monacomanokatra fisie PDF fampitandremana fa "ny fanamafisana ny ranomasimbe dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny sehatry ny sakafo an-dranomasina ary hitondra fiovana goavana amin'ny tahirin-tsakafo ara-barotra, mandrahona ny famatsian-tsakafo sy ny fiarovana ny sakafo ho an'ny olona an-tapitrisany ary koa ny indostrian'ny mpanjono marobe." ref Ny Fanambarana dia manentana ireo mpanao politika hametraka karazana hetsika efatra:
Hanampy amin'ny fanatsarana ny fahatakarana ny fiantraikan'ny ranomafana ny ranomasina amin'ny fampiroboroboana ny fikarohana
Manampy amin'ny fananganana fifandraisana eo amin'ireo mpahay siansa sy mpahay siansa izay ilaina mba hanombanana ny fiantraikan'ny fiantraikany amin'ny fiantraikany amin'ny fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina sy ny fandaniana amin'ny asa atao amin'ny tsy fampiharana
Hanampy amin'ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ireo mpanao politika sy mpahay siansa mba hahatonga ny) politika vaovao mifototra amin'ireo fikarohana amin'izao fotoana izao ary b) ny fanadihadiana ara-tsiansa dia mety hampivoatra ny fanontaniana manan-danja indrindra amin'ny politika
Mba hisorohana ny fanimbana mafy avy amin'ny fanamafisana ny ranomasina amin'ny alalan'ny fampivoarana tetik'asa hentitra sy maika hifehezana ny entona mivoaka
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCurrent CO2 Level
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOcean Acidification-Managementmanokatra fisie PDF